New S40 Self-Stacking (Gyrocompact) Freezer Spiral dia vonona hatolotra ny Oman-NEWS-Square Technology Group Co., Ltd.
S40 vaovao miorina amin'ny tenany (Gyrocompact) frizera malemy dia vonona halefa any Oman
Faly izahay manatitra ny vata fampangatsiahana S40 Self-stacking (gyrocompact) ho an'ny mpanjifantsika mpanodina akoho amam-borona ao Oman. Ilay maodely S40 vao navoaka dia ny kely indrindra ao amin'ny fianakavianay mpamorona vata fampangatsiahana tena. Izy io dia famolavolana vata fampangatsiahana kely misy pirinty kely amin'ny tongotra sy fehikibo 440mm, raha mbola mahavita hatsiaka be hatramin'ny 800 kg / ora hena sy akoho amam-borona. Mifanaraka amin'ny fenitra fidiovana avo lenta misy ny rafitra CIP (madio-toerana) ny endrika. Ny vata fampangatsiahana S40 koa dia misy ny rafitra fanalefahana ny rivotra (ADF) izay mitsoka tsy tapaka ny fanala amin'ny evaporator mandritra ny famokarana, izay manitatra ny famokarana mitohy hatramin'ny 48 ora tsy misy fandotoana.
Io no vata fampangatsiahana fahefatra ho an'ny vokatra hena mangatsiaka ao Moyen Orient tamin'ny taona lasa. Hanohy hanohana ny mpanjifanay amin'ny indostrian'ny fanodinana hena amin'ny faran'ny vokatra zavakanto izahay.
Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho azafady ny fantsona Youtube anay https://www.youtube.com/channel/UCt36nXhL2UM0RrrKvr7gzMw
ary mandefa fanontaniana amin'ny alàlan'ny mailaka ntfe@ntsquare.com.